Sawiro: Odowaa oo Jowhar tagay iyo qorshaha.. | Caasimada Online
Home Warar Sawiro: Odowaa oo Jowhar tagay iyo qorshaha..
Sawiro: Odowaa oo Jowhar tagay iyo qorshaha..
Jowhar (Caasimada Online)-Wasiirka arimaha gudaha Xukuumada Soomaaliya C/raxmaan Maxamed Xuseen Odowaa, oo maanta tagay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa shaaciyay waqtiga Jowhar laga furayo shirka Hiiraan iyo Shabeelaha DHexe.
Wasiir Odowaa ayaa shaaciyay in ka hor bisha Febraayo la sugayo inuu shirka ka furayo magaalada Jowhar ee xarunta Shabeelaha Dhexe, isagoo sheegay shirkaasi uu noqon doono mid taariiqda gala.
C/raxmaan Odowaa iyo wafdigiisa ayaa maanta kormeeray goobaha loo diyaariyay in lagu qabto shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe, iyo goobaha la dajinayo ergooyinka tagaya magaalada.
Wuxuu sheegay in Shacabka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe laga sugayo in bisha Febraayo ka hor ay sameystaan madaxweynaha kaga qeyb galaya shirka ka dhacaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Isaga oo lahadlayay odayaasha dhaqanka ee magaalada Jowhar ayuu sheegay in waxwanaagsan tahay isbedelka ka jira magaalada Jowhar marka loo eego dhanka dhismaha.